UNksz Refilwe Mofokeng weSikole Sezifundo Ngokuphilayo e-UKZN.
UNksz Refilwe Mofokeng weSikole Sezifundo Ngokuphilayo owenza iziqu zobudokotela uzohlala izinyanga ezimbili eNyuvesi yase-Birmingham esebenza nowayengumfundi wase-UKZN, uDkt u-Holly Nel, ohlelweni lwesayensi ethinta ukungcolisa kukaplastiki ngosizo lomfundaze osezingeni eliphezulu we-Association of Commonwealth Universities (i-ACU).
UMofokeng, osanda kuhlangana ne-Duchess of Sussex ngenkathi inkosazana yasebukhosini ivakashele i-ACU, une-diploma yobunjiniyela kwezezimayini yase-Richtech e-Richards Bay, KwaZulu-Natali, azilamanisa ngeqhuzu i-Bachelor of Science neziqu ze-Honours zaseNyuvesi yase-Zululand (e-UNIZULU).
Wenza iziqu zeMastazi e-UNIZULU, eNyuvesi i-Siena e-Italy, nasemaNyuvesi i-Leiden ne-Delft e-Netherlands ngaphambi kokuba enze uqeqesho e-UKZN aqale nezifundo zobudokotela egxile ebuthini bukaplastiki nokubheka isihlava soplastiki.
UMofokeng uhlola umphumela wokuhlobana phakathi kukaplastiki nezinsimbi kanye nezinga lokungcolisa kukaplastiki emtateni waseThekwini. Inhloso yakhe wukubona indima edlalwa uplastiki ekusabalaleni kokungcola kwensimbi ezilwaneni ezihlala ngaphansi kwamanzi nokuqonda ukuthi zibuthinta kanjani ubuhlobo nabantu.
UMofokeng uthi lo mfundaze umenza akwazi ukuqinisa iqhaza lakhe emsebenzini womphakathi wokulwa nokungcolisa kukaplastiki, ikakhulukazi ngaphansi kwamanzi. Wethemba ukuthi isikhathi azosihlala e-Birmingham sizombonisa izindlela ezintsha nezongayo zokuhlaziya ukungcolisa kukaplastiki emvelweni, ikakhulukazi e-Afrika.
Uthe: ‘Njengoba isihloko sezinhlayiya zikaplastiki sisanda kugqama emkhakheni wesayensi yezemvelo, inhloso yami wukusabalalisa umphumela wezinhlayiya zikaplastiki ngeso labantu base-Afrika ukuze kube nezisombululo esizithathayo, sizisebenzise ezwenikazini lethu.’
UMofokeng, onomlando endimeni yezobuthi bamanzi, unothando ngemiphumela yezinto ezingcolisa amanzi, ikakhulukazi ukuqonda iqhaza likaplastiki nezinye izinto ezingcolisayo njengasezindaweni ezingcole kakhulu njengasemitateni.
UMofokeng, okholelwa ekufundiseni ngobungozi bokungcolisa imvelo kukaplastiki nowasungula inhlangano engenzi nzuzo, i-Refilwe Matlotlo ngonyaka wama-2016, ukholwa wukuthi isimo sesingconywana. Emsebenzini wenhlangano yakhe bavame ukuhlanza amabhishi kufundiswa umphakathi ngobubi bukaplastiki emvelweni, nathi sekulethe umehluko omkhulu endleleni abantu ababheka imvelo ngayo. Ngaphezu kwalokho, uthi izinkampani nezitolo ezinkulu seziyaweseka umkhankaso wokunciphisa ukusebenzisa uplastiki njengasezintweni zokumunca iziphuzo namabhelunde.
UMofokeng usanda kwethula inkomishi ephinde isebenziseke; eyaba nedumela elikhulu ezisebenzini ophikweni lweZifundo Ngokuphilayo. Inhlangano yakhe, ngokubambisana nethimba elihlanzayo, iqhamuke nendlela yokugaya iphepha noplastiki ukuze kuphinde kusebenze eMnyangweni asebenza kuwo kanti inhloso wukuthi lolu hlelo lugcine selusabalele i-UKZN yonke kulo nyaka.
Isithombe: Sithunyelwe nguNksz Refilwe Mofokeng